The main character from the massive hit films of 2012 and 2015 are still fresh in everyone’s mind. Ted ရိုင်းစိုင်းနှင့်ရယ်စရာတစ်ချိန်တည်းမှာဒီမှာဒီနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်ပါသည် အထိုင်စက်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ game, he is the main attraction again.
အသေးစိတ်အစီအစဉ်ဂိမ်းကဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ် slot နှစ်ခုစက်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ game. They specialise in developing innovative slots games for online and mobile operators.
ဤ slot နှစ်ခုစက်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ game features5reels,4rows, and 20 paylines. There are various theme related symbols on the reels which are set againstabackdrop ofaparty taking place where the lead character has already gone off toasleep on the sofa.
ဒီ၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ slot နှစ်ခုစက်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ game are:
အဆိုပါ slot နှစ်ခုစက်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ game is filled withanumber of bonus features both in the base game as well as the bonus round. The game comes with an RTP of about 95.81%.